English to Spanish Translation APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အင်္ဂလိပ်စပိန်ဘာသာပြန်ခြင်းဖို့
စပိန်ဘာသာပြန်ခြင်း APK ကိုမှအင်္ဂလိပ်
တစ်ချက်ချင်းအတွက်စပိန်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်အကြောင်းအရာဘာသာပြန်ဆိုအသင့်ဖြစ်ပြီလား? အင်္ဂလိပ်စပိန်သင်တို့အဘို့အကြောင်းအပေါငျးတို့သလုပ်ဖို့ကဒီမှာ Translate အဖြစ်သင်, လက်ျာရာအရပျ၌ရှိကြ၏။
သင်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့တစ်စက္ကန့်၌ဘာသာပြန်ဆိုချင်သော content တွေကိုချရေးနိုငျသညျ, သငျသညျမြားကိုလညျးစကားပြောဆိုရန်ရှေးခယျြနိုငျပြီးတော့ app ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာသင်တို့အဘို့စကားသံကိုဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မယ်မသာ။
သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်း, သန့်စင်ပြီး interface မှတစ်ဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြီးမားတန်ဖိုးကိုချင်လျှင်, အင်္ဂလိပ်စပိန် Translate သင်တို့အဘို့, လက်ျာ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့ပျော်စရာတွေအများကြီးဖွင့်ကြောင့်အသေးစိတ်မယ့်ကြီးမြတ်အာရုံကိုကယ်တင်တတ်၏, ရှိသမျှစဉ်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ခြင်း။
သင်သည်မည်သည့်ကိုပိုမိုကြောင်းဘာသာစကားအခက်အခဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုဘဲချင်တယ်ဆိုရင်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့စပိန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအင်္ဂလိပ်စပိန်ထွက်မတ်တပ်ရပ် Translate စေသည်ဘာလဲ, ဆက်သွယ်ရေးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးရနှငျ့သငျအာမခံချက်, ကကယ်မနှုတ်နိုင်သောရလဒ်များကိုခစျြလိမျ့မညျဖွစျသညျ။
သင်ပြုသောစပိန်ဘာသာပြန်ချက်မှမဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတယ်ဆိုရင်, အင်္ဂလိပ်စပိန်အခုအချိန်မှာ Translate နှငျ့သငျကခစျြလိမျ့မညျကို အသုံးပြု. အပေါ်အာရုံစူးစိုက်!
- စပိန်မှအင်္ဂလိပ်စာသားကို Translate
- စပိန်မှအင်္ဂလိပ်စကားသံကို Translate
- အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် interface ကို
- အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ချက် algorithms
=== ဆက်သွယ်ရန် & ပံ့ပိုးမှု ===
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/www.indie.cool/
- ထို Translate မှုပြဿနာ Fixed!
- တိုးတက်လာသော Voice ကို Translator
- တစ်ဦး bug ကို Fixed
20.59 ကို MB
milky S က